Josoa 12 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865] - (Jos 12)
[Ny anaran'ny mpanjaka izay novonoin'ny Zanak'Isiraely] Ary izao no mpanjakan'ny tany izay resin'ny Zanak'Isiraely, ka lasany ny taniny, teny an-dafy atsinanan'i Jordana hatramin'ny lohasahan-driaka Arnona ka hatramin'ny tendrombohitra Hermona sy ny ilany atsinanan'ny tani-hay [Heb. Arabà]
Sihona, mpanjakan'ny Amorita, izay nonina tany Hesbona ka nanjaka hatrany Aroera, eo amoron'ny lohasahan-driaka Arnona, ka hatreo afovoan'ny lohasaha sy ny antsasak'i Gileada, dia hatramin'ny lohasahan-driaka Jaboka, fari-tanin'ny taranak'i Amona, [Heb. Arabà]
ary ny ilany atsinanan'ny tani-hay hatramin'ny Ranomasina Kinerota ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tani-hay, dia ny Ranomasintsira, amin'ny lalana mankany Beti-jesimota, ary hatramin'ny tany atsimo eo am-bodin'i Pisga. [Heb. Arabà]
Ary azony koa ny tanin'i Oga, mpanjakan'i Basana, isan'ny Refaita sisa, izay nitoetra tany Astarta sy Edrehy,
sy nanjaka tany an-tendrombohitra Hermona sy tany Saleka ary tany Basana rehetra hatramin'ny fari-tanin'ny Gesorita sy ny Makatita ary ny antsasak'i Gileada, fari-tanin'i Sihona, mpanjakan'i Hesbona.
Mosesy, mpanompon'i Jehovah, sy ny Zanak'Isiraely no nandresy ireo; ary ny taniny nomen'i Mosesy, mpanompon'i Jehovah, ho lovan'ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny firenen'i Manase.
Ary izao no mpanjakan'ny tany izay resin'i Josoa sy ny Zanak'Isiraely tany an-dafy andrefan'i Jordana, hatrany Bala-gada, eo an-dohasahan'i Libanona, ka hatramin'ny tendrombohitra mangadihady izay fiakarana ho any Seira, ka ny taniny nomen'i Josoa ny firenen'ny Isiraely araka ny fizarany,
dia ny any amin'ny tany havoana sy amin'ny tany lemaka amoron-tsiraka sy amin'ny tani-hay sy amin'ny tany ambodin'ny tendrombohitra sy any an-efitra ary any amin'ny tany atsimo, dia ny an'ny Hetita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita:[Heb. Sefela][Heb. Arabà]
Ny mpanjakan'i Jeriko, iray; ny mpanjakan'i Ay, izay eo anilan'i Betela, iray;
ny mpanjakan'i Jerosalema, iray; ny mpanjakan'i Hebrona, iray;
ny mpanjakan'i Jarmota, iray; ny mpanjakan'i Lakisy, iray;
ny mpanjakan'i Eglona, iray; ny mpanjakan'i Gazera, iray;
ny mpanjakan'i Debira, iray; ny mpanjakan'i Gadera, iray;
ny mpanjakan'i Horma, iray; ny mpanjakan'i Arada, iray;
ny mpanjakan'i Libna, iray; ny mpanjakan'i Adolama, iray;
ny mpanjakan'i Makeda, iray; ny mpanjakan'i Betela, iray;
ny mpanjakan'i Tapoa, iray; ny mpanjakan'i Hefera, iray;
ny mpanjakan'i Afeka, iray; ny mpanjakan'i Lasarona, iray;
ny mpanjakan'i Madona, iray; ny mpanjakan'i Hazora, iray;
ny mpanjakan'i Simrona-merona, iray; ny mpanjakan'i Aksafa, iray;
ny mpanjakan'i Tanaka, iray; ny mpanjakan'i Megido, iray;
ny mpanjakan'i Kadesy, iray; ny mpanjakan'i Jokneama any Karmela, iray;
ny mpanjakan'i Dora eo amin'ny havoan'i Dora, iray; ny mpanjakan'ny firenen-tsamy hafa any Gilgala, iray;ny mpanjakan'i Tirza, iray. Iraika amby telo-polo no isan'ny mpanjaka rehetra.
ny mpanjakan'i Tirza, iray. Iraika amby telo-polo no isan'ny mpanjaka rehetra.
Josoa 1 / Jos 1
Josoa 2 / Jos 2
Josoa 3 / Jos 3
Josoa 4 / Jos 4
Josoa 5 / Jos 5
Josoa 6 / Jos 6
Josoa 7 / Jos 7
Josoa 8 / Jos 8
Josoa 9 / Jos 9
Josoa 10 / Jos 10
Josoa 11 / Jos 11
Josoa 12 / Jos 12
Josoa 13 / Jos 13
Josoa 14 / Jos 14
Josoa 15 / Jos 15
Josoa 16 / Jos 16
Josoa 17 / Jos 17
Josoa 18 / Jos 18
Josoa 19 / Jos 19
Josoa 20 / Jos 20
Josoa 21 / Jos 21
Josoa 22 / Jos 22
Josoa 23 / Jos 23
Josoa 24 / Jos 24